/blog/Gallery/DECA budada-Ultimate Guide Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (Durabolin)
Posted on 05 / 30 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Waa maxay Nandrolone Decanoate(DECA)
Maanta, dad badan oo jidh-dhiseyaashu waxay doorbidaan in ay noqdaan steroids si ay kor ugu qaadaan muruqooda. Nandrolone Decanoate, oo loo yaqaan 'DECA', oo lagu iibiyo magaca magaca 'DECA-Durabolin', waa mid ka mid ah steroids xoog leh oo bixiya natiijooyin fantastik ah marka xaq loo leeyahay guriga. Haddii aad ku cusub tahay warshadaha, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waxa Deca Durabolin yahay iyo waxa ay kuu qaban karto. Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha Nandrolone Decanoate (DECA) ee ka duwan kuwa kale.
Nandrolone Decanoate (DECA) waa steroid tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u leh, tanina waxay ka dhigeysaa mid caan ah. Waa maxay faa'iidada isticmaalka steroid gaabis ah? Waqtiga nuska ah wuu sii dheeraanayaa, waxay sii qaadan doontaa in steroidku ka baxo jirka. Sidoo kale, tani waxay ka dhigan tahay in qiyaasta Nandrolone Decanoate aysan ahayn inay noqoto mid soo noqnoqota. Kaliya waa inaad iska muddaa seddex isbuuc ka dib, si ka duwan kuwa kale ee aad u baahan karto inaad tallaasho toddobaadle ah.
Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) ayaa sidoo kale lagu gartaa waxyeelo yar, taasoo u dhiganta kuwa jecel in ay si fiican u daryeelaan caafimaadkooda. Dhibaatooyinka yaryar ee daran waxaa ka mid ah sababtoo ah marar dhif ah ayay u badashaa estrogen.
Saameynta Nandrolone Decanoate ee jirka dhismaha
-Inaan dib u soo kabsado
-In la sii wado caafimaadka wadajirka ah
- Awood u yeelo
-Ku qabso murqaha caanaha
Hagaajinta soo kabashada
Marna ma soo gashay qolka jimicsiga mana qaadi karin wax dhaqdhaqaaq jireed sababtoo ah daalka illaa xiligii shaqadaadii ugu dambeysay? Ka dib isticmaalka Nandrolone Decanoate, waxaad ogaan doontaa inaad ka soo kabsan karto jimicsigii hore oo aad awoodi kartid in aad samaysid xitaa wakhti xiga.
Hagaajinta caafimaadka wadajir
Looma baahna xanuun wadajir ah oo dheeraad ah iyadoo la adeegsanayo Nandrolone Decanoate maadaama ay hubineyso inay marwalba caafimaad qabaan.
Haddii aan lahayn awood ku filan, yoolalka jirka jirkaagu wuxuu noqon karaa mid aan habooneyn. Dhinaca kale, haddii aad heshay xoogga, waxaad kor u qaadi kartaa culeyska weyn ee halkan ka heli kara muruqyo badan. Nandrolone Duufaan cad waxay kordhisaa xooggaaga, adiga oo kuu oggolaanaya inaad miisaanka ku dhufatid xoogga ugu sarreeya.
Kordhi qiyaasta muruqa caanaha
Nandrolone Decanoate wuxuu leeyahay awooda dhismaha murqaha oo cajiib ah, waxkuna waa waxa kaliya ee ku darsaday muruq liin tiro.
Ma u baahan tahay inaad ka dhigto jimicsigaaga mid aad u sareeya? Isticmaalka Nandrolone Decanoate wuxuu kaa caawin doonaa sameynta kulannadaada jimicsiga si wax ku ool ah, adoo gaarsiinaya jirkaaga oo aad u xishoonaysay muddo gaaban.
Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (DECA)
Tallaabada 1: Miisaanka Nandrolone Decanoate budada u miisaamee xayawaan.
Tallaabada 2: Ku dar Ba iyo BB.
Tallaabada 3: Dufciyayaashu waxay billaabaan inay ku milmaan budada. Si tartiib ah u walaaq si aad u dedejiso geedi socodka.
Tallaabada 4: Ku dar saliida saliidda si aad u xaliso oo u walaaq.
Tallaabada 5: U soo samee xalku xargaha saliingaha ee loo isticmaali doono in lagu xareeyo oo lagu xiri irbad ku galo sirinjeerka.
Tallaabada 6: U qaado weelka
Kiimikooyinka aad u baahan tahay si aad u diyaariso
Nandrolone Decanoate Recipe for DECA 50ml kasta oo ka mid ah 200mg / ml
10grams Nandrolone Duufaan cad
Saliid Xaydhut 32.50ml (Iska ilaali saliidaha iyo kuwa aad xasaasiyad u leedahay).
2.5 Khamriga Benzyl 5% (Waligaa ha ka dhaafin 5% BA wixii isbeddel ah ee aad qaadato)
Qalabka loo baahan yahay
Gubashooyinka horay loo shubay
Cirbadaha lafdhabarta ah
.22 Sifaftireyaasha mikron syringe
Qaaddo si aad u walaaqdo
Tallaabo ay ku socoto tilmaamo ku saabsan sida loo soo saaro Nandrolone Decanoate
Tallaabada 1: Ku miisaanka budada Nandrolone Decanoate digsi digsi leh
Taas waxaa sameeya adoo qaadanaya warqad, adigoo ku riixaya miisaanka iyo adigoo riixaya daryeesha si miisaanka warqadda aan laguugu darin markaad qiyaasaysid budadaada. Ku dar foostadaada yar si aanad u baahneyn inaad xakameyso ka dib markaad ka badan tahay miisaanka budadaada ee ugu fiican. Si loo hubiyo inaad sax tahay, hel miisaan sax ah oo ku filan gram. Markaad hesho toban garaam, hadda waad fiicantahay inaad tagto.
Tallaabada 3: Xalku waxay bilaabaan inay ku milmaan budada. Si tartiib ah u walaaq si aad u dedejiso geedi socodka.
Waxaad dooran kartaa in aad diiriso xalka adoo isticmaalaya biyo waas si aad uga dhigto mid deg deg ah. Sidee ayaad u samayneysaa? Qaado dhar biyo leh oo ku rid shooladda si aad u kululeyso. Gaariga xaraaradda oo ku jira xalka oo ku rid dhowr mitir cabbir biyo. Waxaad kaloo isticmaali kartaa biyo diirran oo ka samaysan kiniiniga. Iska ilaali biyo kulul sababta oo ah waxay u horseedi doontaa qulqulka qulqulka ka hortagga habka.
Tallaabada 4: Ku dar saliingaha saliid si xal ah u walaaq.
Saliida saliidda waa inay lahaataa heerkul isku mid ah sida xalka si loo ogaado xalka si sax ah loo qulqulayo. Iska hubi wax kasta oo hormoon ah oo laga yaabo inuu abuuray oo hubiyo in aysan jirin wax ka hor inta aanad u guurin habka sifeynta.
Tallaabada 5: Samee xalalka kuleylka ah siriinjka loo isticmaali doono si loo xaddido oo loo xiro irbad ku galo sharooto sirinjir.
Isticmaal cadaadis ku saar syringe si aad u oggolaato xalka ay u socoto oo u bedeleyso shaandhada cusub markaad aragto in geeddi-socodku uu gaabis yahay.
Tallaabada 6: Weel weelka
Marka lagugu sameeyo habka sifeynta, xalku wuxuu diyaar u yahay isticmaalka. Weel weelka si aad isaga ilaaliso wasakheynta.
Marka ay timaado qaadashada steroids, waxaa jira laba nooc oo dad ah; kuwa iibiya Nandrolone Decanoate iib ahaan iyo kuwa doorbidaya guriga inay ka soo saaraan Nandrolone Decanoate cayriin. Adeegsiga labadaba, waxaa jira hal hadaf oo keliya; si loo abuuro jidh muuqaal fiican leh.
Haddii ay dhacdo inaad doorbideyso inaad guriga ku dubato steroid naftaada, markaa waa inaad ugu yaraan isku daydaa inaad u sameyso sida saxda ah. Adoo raacaya cuntada Nandrolone Decanoate ee lagu siiyay sida loo sameeyo Deca, waxaad u badan tahay inaad hesho natiijooyin fiican. Bixinta ama isticmaalka qadar yar oo ka mid ah dareerayaasha ama Nandrolone Duufaan cad waxay saameyn kartaa tayada steroidkaaga.
Run ahaantii, qalabka saxda ah iyo maaddooyinka, waxaad si raaxo leh ugu soo celin kartaa Nandrolone Decanoate oo aad ku ogaan kartaa kartidaada jir ahaaneed.
Nandrolone Decanoate, GJ Blokdijk, Shabakadda Daabacaadda ee Independent Publishing, 2018, bogga 1-170
Anabolic Steroids iyo Athlete-2d ed, William N. Taylor. MD, bogga 39
Mukhaadaraadka, Madadaalada, iyo Waxqabadka Jirka, oo uu sameeyay John A. Thomas, bogga 27-30
Waa maxay macluumaadka ay tahay inaad ogaato kahor intaadan adeegsan Erlotinib
11 shay oo ay tahay inaad ka ogaato Resveratrol
Sida loo Isticmaalo Trenbololone Recipe si loogu qaso Trenbolone Enanthate Powder 10 Steroids Ugu Caansan ee Anabolic-ka ah Matoor